वीरगंज, ९ मंसिर
वीरगंजको विर्तामा रहेको जिल्ला कारागारमा रहेका अधिकांस कैदी बन्दी छाला रोगबाट पीडित रहेको पाइएको छ ।
कारागार भित्रको अव्यवस्थित बसाई र पानी स्वच्छ नहुँदा अधिकांशमा दाद जस्ता छाला सम्बन्धी रोग पाइएको यौन तथा छाला रोग विशेषज्ञ डा .मनिष प्रधानले बताए ।
धेरै जसोमा शरिरका विभिन्न भागमा दाद जस्ता छालासम्बन्धी रोग देखिएको छ । सरसफाइमा ध्यान नदिनु र पानी समेत स्वच्छ नहुँदा यस्तो रोग फैलने डा .प्रधान बताउछन् ।
जिल्ला कारागारमा शनिबार वीरगंज टेलिभिजनले आयोजना गरेको निशुल्क स्वाथ्य चेकजाँच शिविरमा सहभागि मध्ये अधिकांशमा छाला सम्बन्धी रोग देखिएको हो ।
यस्तै उच्च रक्तचाप, ग्याष्ट्रिक जस्ता रोगीको सख्या पनि उल्लेख्य रहेको बरिष्ठ फिजिसियन डा.निरज सिंहले बताए । चिल्लो, पिरो तथा मसलायुक्त खाना बढी खानु, नियमित व्यायाम नगर्नु जस्ता बानिले मान्छेमा उच्च रक्तचाँप बढाउने गरेको डा . सिंहको भनाइ छ । यस्तै समयमा खाना नखानाले अधिकांशलाई ग्याष्ट्रिकको समस्या देखिने गरेको पनि उनले बताए ।
कारागारमा मानसिक रोगीहरु पनि भेटिएको र उनीहरुको पनि उपचार गरिएको टेलिभिजनका प्रवन्धक दिपेश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
शिविरमा जिल्ला कारागारमा रहेका ५ सय २ जनाको चेकजाँच गरिनुका साथै निशुल्क औषधी समेत वितरण गरिएको कार्यक्रम संयोजक एवं सञ्चारकर्मी आविद हुसेनले जानकारी दिनए ।
बरिष्ठ फिजिसियन डा.निरज सिंह, सर्जन डा.मनोज गुप्ता, बरिष्ठ चर्म, यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ एवं जेनरल फिजिसियन डा.सुमन प्रसाद, बरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डा.लक्ष्मी गुप्ता, यौन तथा छाला रोग विशेषज्ञ डा.आरपी जैसवाल, डा. मनिष प्रधान लगायतले शिविरमा चेकजाँच गरेका थिए ।
कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका सुनिता तामाङ, रुपा श्रेष्ठ, लक्ष्मी बस्याल, कृष्ण थापा, रामबाबु रौनियार, सुरेस लामा, जितेन्द्र ठाकुर, सागर खत्री लगायत ५ सय २ जनाको चेकजाँच गरिएको हो ।